Saddex Kooxood Oo Dalabyo Miiska U Saaray Marco Asensio & Laba Kooxod Oo Premier League Oo Ka Mid Ah – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta Saddex Kooxood Oo Dalabyo Miiska U Saaray Marco Asensio & Laba Kooxod Oo Premier League Oo Ka Mid Ah
Saddex Kooxood Oo Dalabyo Miiska U Saaray Marco Asensio & Laba Kooxod Oo Premier League Oo Ka Mid Ah
Kooxda Real Madrid ayaa u muuqata mid waayi doonta xiddiga da,yarka ah ee khadka dhexe uga ciyaara ee Marco Asensio xilli ay saddex kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn yurub ay tartanka 3 gees leh u galayaan sidii ay u heli lahaayeen adeegiisa mnarka la gaaro suuqa xagaaga ee dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa inay doonayaan inay kula dagaalamaan Manchester City iyo Bayern Munich xiddiga Real Madrid Marco Asensio.
Sida laga soo xiganayo saxafiga reer Spain ee Eduardo Inda saddexda kooxood ayaa dhamaantood xiriir la sameeyay wakiilka xiddiga da,yarka ah.
Los Blancos ayaa xilli ciyaareedkan ku jirta qaab ciyaareed liita iyaga oo 17 dhibcood ka dambeeya kooxda Barcelona oo ah hogaamiyayaasha horyaalka La Liga halka ay sidoo kale copa Del Rey-ga kaga hareen lugta kooxda Leganes.
Asensio ayaa xilli ciyaareedka si cajiib ah ku bilowday isaga oo 8 gool dhaliyay tartamada oo dhan laakiin Zidane ayaan mar kasta shaxdiisa joogtada ah ku soo darin isaga oo kaliya 2 kulan ku bilowday 8-dii kulan ee ugu dambaysay ee horyaalka La Liga.
Xilli la filayo in ay Real Madrid isku shaandhayn weyn samayso dhamaadka xilli ciyaareedka Madaxweynaha kooxda Real Madrid ayaa diyaar u ah in uu Asensio iska iibiyo si uu lacagtiisa kooxda ugu xoojiso.
Inda ayaa sheegaya in uu 22 jirka reer Spain uu dalabyo ka haysto laakiin Real ayaa lagu soo waramayaa in ay diidantahay in ay iibiso xiddiga.
Saxafiga Inda ayaa El Chiringuito TV u sheegay” Asensio waxa uu dalabyo ka haystaa kooxaha Bayern,City iyo United laakiin Real Madrid ayaan doonayn in ay iibiso”.